NGC 3077 - ဝီကီပီးဒီးယား
NGC 3077 by HST, 1.5′ view
10° 03′ 19.1″
+68° 44′ 02″
14 ±4km/s
ကော့စမစ် အကွာအဝေး လှေကား
12.8 ± 0.7 Mly (3.9 ± 0.2 Mpc)[a]
5′.4 × 4′.5
UGC 5398, PGC 29146
NGC 3077 သည် M81 Group အဖွဲ့၏ ဂလက်ဆီငယ်ဖြစ်ပြီး အာရှာ မေဂျာ ကြယ်စုတန်း၌ တည်ရှိသည်။ Catalogue of Named Galaxies တွင် ယင်းအား Pulvereus Ursae Majoris သို့မဟုတ် ဖုန်ထူသော ဂလက်ဆီဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ဘဲဥပုံစံ ဂလက်ဆီဟု ထင်ရသော်လည်း ယင်းသည် တမူထူးခြားသော ဂလက်ဆီဖြစ်သည်။ ယင်းအား ၁၈၀၁ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဝီလီယံ ဟာရှယ်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂလက်ဆီ၏ အကွာအဝေးအား surface brightness fluctuation နည်းလမ်းဖြင့် တိုင်းတာရာ ၁၃ ± ၀.၈ Mly (၄.၀ ± ၀.၂ Mpc). ရသည်။ ပျမ်းမျှအကွာဝေးမှာ 12.8 ± 0.7 Mly (3.9 ± 0.2 Mpc).[a] ဖြစ်သည်။
NGC 3077 at SEDS
^ average(4.0 ± 0.2, 3.82 ± 0.38) = ((4.0 + 3.82) / 2) ± ((0.22 + 0.382)0.5 / 2) = 3.9 ± 0.2
NGC 3077 on WikiSky: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for NGC 3077။ 2006-12-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ J. L. Tonry (2001). "The SBF Survey of Galaxy Distances. IV. SBF Magnitudes, Colors, and Distances". Astrophysical Journal 546 (2): 681–693. doi:10.1086/318301. Bibcode: 2001ApJ...546..681T.
↑ ၃.၀ ၃.၁ I. D. Karachentsev (2004). "A Catalog of Neighboring Galaxies". Astronomical Journal 127 (4): 2031–2068. doi:10.1086/382905. Bibcode: 2004AJ....127.2031K.
↑ Karachentsev, I. D. (2006). "Masses of the local group and of the M81 group estimated from distortions in the local velocity field". Astrophysics 49 (1): 3–18. doi:10.1007/s10511-006-0002-6. Bibcode: 2006Ap.....49....3K.
↑ Catalogue of One Thousand Named Galaxies။ 21 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ကိုဩဒိနိတ်: 10h 03m 19.1s, +68° 44′ 02″
ဤ ဂလက်ဆီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=NGC_3077&oldid=716298" မှ ရယူရန်
အာရှာ မေဂျာ (ကြယ်စုတန်း)
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။